၃.၂.၂၀၁၇ | Yangon Region Commodity Exchange
History of yrce
Sample Contract LC
If not member yet, register here
Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (line 73 of /home/content/93/10166493/html/yangoncommodityexchange.com/sites/all/modules/contrib/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (line 76 of /home/content/93/10166493/html/yangoncommodityexchange.com/sites/all/modules/contrib/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
စဉ် ကုန်စည် ရေတွက်ပုံ လက်ငင်းဈေးနှုန်း
၁။ ဖျာပုံရွှေပုဇွန်ရှယ် ပိဿာ 40000-45000
၂။ ဖျာပုံရွှေပုဇွန်ရိုးရိုး ပိဿာ 30000-35000
၃။ ဖျာပုံ ချိုကြီးရှယ် ပိဿာ 20000-23000
၄။ ဖျာပုံ ချိုကြီးရိုးရိုး ပိဿာ 17000-18000
၅။ ဖျာပုံ ချိုသေးရှယ် ပိဿာ 11000-13000
၆။ ဖျာပုံ ချိုသေးရိုးရိုး ပိဿာ 9000-10000
၇။ ဖျာပုံ အငံလုံးရှယ် ပိဿာ 7000-8000
၈။ ဖျာပုံ အငံလုံးရိုးရိုး ပိဿာ 5000-6000
၉။ ဖျာပုံ အသားကြိုး ပိဿာ 1000-1500
၁၀။ ဖျာပုံ အသားကြိုး ရိုးရိုး ပိဿာ
၁၁။ မြိတ်ပုဇွန် လတ် ပိဿာ 18000-20000
၁၂။ မြိတ်ပုဇွန် ရိုးရိုး ပိဿာ 13000-15000
၁၃။ ရခိုင် ရွှေပုဇွန်ရှယ် ပိဿာ 25000-30000
၁၄။ ရခိုင် ရွှေပုဇွန် ရိုးရိုး ပိဿာ 15000-20000
၁၅။ ရခိုင် ပုဇွန် လတ် ပိဿာ 10000-12000
၁။ ငါးကျီး ကြပ်တိုက်ကြီး ပိဿာ 30000-35000
၂။ ငါးကျီး ကြပ်တိုက်သေး ပိဿာ 22000-25000
၃။ ငါးမြွေထိုး ပိဿာ 8000-10000
၄။ ငါးရံ့ခြောက်ကြီး ပိဿာ 25000-27000
၅။ ငါးရံ့ခြောက်လတ် ပိဿာ 18000-20000
၆။ ငါးရံ့လုံး ပိဿာ 10000-12000
၁။ ကလိန် ပိဿာ 6500-7000
၂။ ငါးကွမ်းရှပ် ပိဿာ 12000-15000
၃။ ငါးတံခွန်မျှင်းကြီး ပိဿာ 4500-5000
၄။ ငါးတံခွန်လုံး ပိဿာ 2000-2500
၅။ ငါးနှပ်ချို ပိဿာ 7500-9000
၆။ ငါးနှပ်ငံ ပိဿာ -
၇။ ငါးပုတ်သင် ပိဿာ 3000-3500
၈။ ငါးမန်းသားတွဲ ပိဿာ -
၉။ ငါးရောင်ကြီး ပိဿာ 20000-22000
၁၀။ ငါးရောင်လတ် ပိဿာ 15000-18000
၁၁။ ဆီငါးရောင် ပိဿာ 18000-20000
၁၂။ ငါးရွှေကြီး ပိဿာ 5500-6000
၁၃။ ငါးရွှေသေး ပိဿာ 3000-3500
၁၄။ ငါးမီးတံသွယ် ပိဿာ 1000-1500
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိဿာ 3500-4000
© 2013 Yangon Commodity Exchange